Civic 18 - I-Airbnb
Indlu iyakwamkela, kunye nentendelezo encinci kunye nomnyango ozimeleyo kwaye ibekwe kumgangatho wokuqala wesakhiwo senkulungwane ye-19 ebekwe kwiziko lembali, ilitye elivela kwi-cathedral yaseValdagno;
Le ndlu inegumbi lokulala eliphindwe kabini elijonge kwiziko elinokhetho lwepouf eba yibhedi yesithathu, igumbi lokulala lesibini elinebhedi kunye nebhedi yesofa, igumbi lokuhlambela elineshawa, igumbi lokutyela, ikhitshi kunye nentendelezo encinci enesango elizimeleyo. Kumagumbi anokongezwa, ukuba kuyimfuneko, ibhedi yabantwana, kunye namacala.
4.70 · Izimvo eziyi-104
Indawo yokuhlala itholakala kwindlela (Via Galliano) ehamba ngokuhambelana nekhosi yeValdagno, ekudibaneni kwendlela ekhokelela kwiDuomo San Clemente (Via D. Manin) kunye nendlela ekhuphuka iinduli ukuya kwiCastello. ezithili (Via Castello).
Esi sakhiwo sisembindini wesixeko esihlala siphila, ngakumbi ngokuhlwa, ngenxa yobukho beendawo zokutyela / iindawo zokutyela ezininzi, kubandakanya nembali ...
Ukungahlali kwisakhiwo seCivico 18, kuyimfuneko ukuba iindwendwe zethu zinxibelelane ngexesha lokufika kwazo, ukuze zingabangeli ukuphazamiseka kubo.
Ukufumaneka okubanzi kakhulu ekunikezeni iimpendulo kunye nolwazi kwiindwendwe zethu ngomyalezo obhaliweyo okanye ngokuthe ngqo ngefowuni.
Ukufumaneka okubanzi kakh…